> Magan galyo
Suwiska dadka waydiista magangalyada waxaa arjiyadooda ama codsigooda ka mas’uul ah hay’adda looyaqaanno (ODM) oo hoostaga dawladda dhexe « office fédéral des migrations »kana mas’uula dadka suwiska kucusub ee soodagay ama usoo guuray luguna magacaabo (immigrations).
Waxa jira afar xarumood oo dadku codsigooga amba arjiyadooda dhigaan amba udhiibaan marka aysoo galaan suwiska, waxayna kukala yaallaan afarta gees eesuwiska waxayna kala yihiin afarta xarumood sidan :
Centre d’enregistrement de Bâle, kuna yaalla kantoonka basel ahna waqooyi
Centre d’enregistrementde Chiassokuna yaalla kantoonka tesin ahna koonfur
Centre d’enregistrement de Kreuzlingen, kuna yaalla kantoonka sangalen ahna bari
Centre d’enregistrement de Vallorbe kuna yaalla kantoonka vaud ahna galbeed
Marka ay iska qoraan xarumahaas kor kuqoran mid kamida, arjiyadoodana dhiibtaan dadka magangalyo doonka ah waxa looqaybiyaa oo la dejiyaa kantoonnada oo dhan. Muddada arjiyadooda la darsayo, dadkaas waxa daryeelkooda oodhan kamas’uula gobollada ladejiyo (kaantoonnada).
Hay’adaha suwiska ee gargaarka qaxootiga ee layidhaahdo OSAR iyo kuwo kale oo udhaqdhaqaaqa qaxootiga iyo magangalyo doonnada kana midyihiin « CARITAS,EPER, OSEO,CRS iyo VSJF » waxay difaacaan xaquuqda dadka magangalyada waydiista suwiska.
Daraasadda lagu sameeyo codsiyada amba arjiyada magangalyadoonka iyo qaxootiga ee suwisku, si heersare ah ayey uxadidantahay waanay adagtahay.
Haddaba aqoon ulahaanshaha sida xeerarka magangalyadoonka suwisku ushaqeeyaan iyo arjiyada (codsiyada) runta ahi waxay doorweyn kuyeeshaan go’aanka laga gaadhayo arjiyada oo noqda ogolaansho « bosetif : positive » amba diidmo « negatif » oo waddanka laga bixiyo ruuxii arjigiisa la diido.
Suwiska, dadka magangalya doonka (asile), qaxootiga (refugier),dadka loo ogolaado magangalyo kumeelgaadh ah (admissions provisoires), dadka codsiyadooda la diido (requérant-e-s débouté-e-s) iyo kuwa kujooga sharci la’aanta (sans papiers) waxay intabadan lakulmayaan xaalado adag. Si tafaqyatiran oo loogu sharraxo amba loogu macneeyaa ugu haboon xaaladda.
Warbixintan iyo tilmaamaha an idiinsoo gudbino kucamalfala (isticmaala) amba khadkayaga internetka karaadsada warbixin intan kabadan.
In this section: Cutubyada kala duwan ee shaqada magan galyada, Xeerka Magangalyada, Daljooga, Dibucelinta laajiyiinta, Caawinta iyo waanada xeer yaqaannada
Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) / Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH)
Lacagta iyo dhaqaalaha
Caawinta iyo waanada xeer yaqaannada
Cutubyada kala duwan ee shaqada magan galyada